Baby Songs - Songs u Baby Muqaal
> Resource > Music > Songs u Baby Muqaal
Wax kasta oo da'da ilmahaagu ku jiro hadda, ma waxaad u xusuustaa sida kid eegay sida markii ugu horeysay ee uu isagu / iyadu u dhoola, Gurguurte, ku fadhiiso, waxaa istaagay , ruxruxo nabadgeliyo, oon Cunayn Cunno oo wuxuu kaxaystay / talaabo hore iyada? Yar yara A haydh, uh? Iyo sidoo kale in aad u xusuusan doonaa haddii aad sameeyey slideshow ilmaha sannadka ugu horeeya ee la isticmaalayo oo dhan oo ka mid ah "ayaguna" sawiro ku weheliyay nasteexo, music asalka u qurux badan in slideshow ah.
Waxaa had iyo jeer waa u roon yahay si ay u daawadaan buuxda slideshow xusuus qaali ah. Haddii nidaamka samaynta slideshow noqdo mid fudud, waxaa laga yaabaa in daro ku farxay. Ka hor inta slideshow ah, waxaa laga yaabaa in aad heshay sawirada ilmahaaga "ayaguna" haddii aad isha ku daqiiqad kasta oo ilmahaaga qabsaday. Laakiin halka aad ka heli kartaa heeso slideshow ilmuhu si fudud? Sida aad kala soo bixi kartaa music ka websites ah? Ugu dambayntiina sida loo sameeyo cajiib ah duubey ? Ha welwelin. Kaliya na raac si aad u hesho xal u karno dhammaan dhibaatooyinka caafimaad.
Qeybta 1: Liiska weyn ee songs ilmahaaga slideshow samaynta
Qeybta 2: Sida loo sameeyo duubey la songs ilmaha lagala soo bixi
Qeybta 3: Halka laga helo heesaha ilmaha ku saabsan web
Qeybta 4: Sida loo download songs ilmahaaga slideshow samaynta
Qeybta 5: Sidee si ay u sameeyaan duubey la songs ilmaha lagala soo bixi
Qeybta 1: Liiska weyn ee songs ilmaha u sameynta slideshow
Halkan waxaa ku qoran liiska songs ilmaha in aad ka heli kartaa wax weyn inay si fiican u dhagayso.
Salaadda 1. A Baby ee - Kathy Trocolli
Music Pop, CCM
Hagaha Download mp3 ama video
Kathleen Colleen "Kathy" Troccoli waa casriga ah Christian music oo gabayaa ahaa, qoraaga, iyo afhayeenka.
2. Baby Mine - Allison Krauss
Alison Maria Krauss waa Maraykan ah bluegrass dalka Fanaanada-Xisbi iyo muusikiiste. Waxay galeen waaxda muusikada da'da hore, ku guuleystay tartanka deegaanka by da'da toban iyo qoraalana markii ugu horeysay ee afar iyo toban.
3. Beautiful Boy-- Celine Dion
Dhagaxayga weyn Pop
Celine Marie Claudette Dion, CC OQ ChLD waa heesaa Canadian ah, Xisbi, ganacsade iyo aktarada marmar.
4. hobeeyaa - Johannes Brahms
Rabaab Piano Qadiimiga ah
Johannes Brahms ahaa laxamiistaha ah German iyo biyaaniiste. Brahms dhashay Hamburg galay qoyska ka mid ah Lutheran, inta badan ee uu noloshiisa xirfadeed ee Vienna, Austria. In uu noolaa, Brahms ee bulshada dhexdeeda iyo saamaynta ahaayeen badan.
5. Handprints On The Wall - Kenny Rogers
Kenneth Ray "Kenny" Rogers waa heesaa-Xisbi iyo rikoor ah soosaare Maraykan ah.
6. Waxa uu i siiyay Waxaad - Siera
Sierra Kay Kusterbeck dhashay (December 18, 1990), si fiican u yaqaan Sierra Kay, waa Maraykan ah oo gabayaa ahaa-Xisbi iyo model. Waxay ugu wanaagsan ee loo yaqaan vocalist hogaanka guutada dhagaxa VersaEmerge, taas oo ay ku soo biiray sanadkii 2007.
7. In Indhaha gabadhaydu - Martina McBride
Martina Mariea Schiff, oo loo yaqaan xirfad sida Martina McBride, waa music dalka oo gabayaa ahaa, Xisbi, iyo record soo saare American. Waxay caan ku ah iyada duwan hees ku soprano oo iyada wax pop dalka
8. ha u ahaadeen Little - Billy Dean
Billy Dean, Richie McDonald
William Harold "Billy" Dean, Jr. waa heesaa music dalka Mareykanka iyo Xisbi. Billy Dean ugu horeysay heshay dareenka qaranka ka dib markii ay soo muuqday on Star tartan Search tayo telefishanka.
9. Gabar - lay jirrabayay ayaa
Xusuusta jirrabyadii waa koox vocal American yaqaano guul la dhisan Records inta lagu guda jiro 1960 iyo 1970.
10. Daddy Me gabya seexda - BlacktopGYPSY
BlacktopGYPSY waa koox ka mid ah fanaaniinta in ay sii daayay heeso badan Daddy Me gabya seexda mid iyaga ka mid ah.
11. Discovery ugu weyn - Elton John
Dhagaxayga weyn jilicsan, Oo dhagax weyn symphonic
Sir Elton John Hercules CBE waa laxamiistaha ah Ingiriisi iyo heesaa, kan qudhiisu uu weheliyo on biyaano ah. Wuxuu la soo shaqeeyay lyricist Bernie Taupin sida xaaskiisa Xisbi tan iyo 1967; ay iska kaashadeen in ka badan 30 albums taariikhda.
12. Gift ugu weyn - Steve & Annie Chapman
Paul Steven Chapman
Annie Chapman, ahayd dhibane dilaaga caan ah oo aan haybtooda la caadaystay Jack Ripper ah, kuwaas oo ku dhintay iyo la googooyay dhowr dumar ah aagga Whitechapel ee London ka Agost in hore November 1888.
13. Boys Little adag - Gary Allan
Don Sampson, Harley Allen
Gary Allan Herzberg, oo loo yaqaan xirfad sida Gary Allan, waa fanaan American music dalka.
14. yeellay - Jack Johnson
Dhagaxayga weyn Folk, Oo dhagax weyn oo jilicsan, Oo dhagax weyn pop, Oo dhagax weyn loomana baahno
Jack Johnson waa Maraykan ah oo gabayaa ahaa-Xisbi, muusikiiste, actor, record soo saare, iyo surfer hore ee xirfad. Johnson la og yahay ugu horayn ay shuqulkiisa u sameeyaan in dhagaxa jilicsan iyo qaybaha loomana baahno.
15. Waxaan Just Waxaad jeclaada - shan Dagaal
Dhagaxayga weyn jilicsan
Vladimir John Ondrasik III, loo yaqaano magaca uu stage Shan for Dagaal, waa heesaa Maraykan iyo Xisbi. Waxa uu si fiican loogu uu dhagax weyn piano ku salaysan, sida Top 40 hits "Superman", "100 sano" iyo "halxidhkii".
Wondershare TunesGo - Download music wax kasta ka sarreeya oo lacag la'aan ah oo la TunesGo
Qeybta 3: Halka laga helo heesaha ilmaha internetka
Haddii aad rabto in ka badan fursadaha song ilmaha, halkan yihiin goobaha music dhowr iyo goobaha music video in aad ka raadin kartaa heeso ilmaha. Eeg liiska goobaha sida hoos ku qoran.
Goobaha Music video
Pandora waa radio ugu weyn ee internet oo aad u sii qulquli karaan wax badan oo ka mid ah heeso kala duwan.
YouTube, waa ugu weyn video search engine internetka oo awood aad si aad u ogaato noocyada kala duwan ee videos music.
Spotify waa adeeg music ah in aad awood u tahay in la helo malaayiin songs in ay dhagaystaan ​​online. MTV waa khayraadka autority u videos music iyo aad si fudud u heli kartaa waxa aad u baahan tahay.
Grooveshark waa adeeg lacag la'aan ah music in aad samayn kartaa oo inta badan si aad u ogaato songs aan xad lahayn. VEVO leedahay wax badan oo videos music in aad samayn kartaa oo inta badan.
Lugood Radio waa adeeg cusub oo radio internet oo aad isticmaali karto si aad u hesho songs ilmuhu si fudud adiga oo isticmaalaya mid ka mid ah ilmaha song aad hore u tiqiin. Yahoo Music waa meesha aad ka heli kartaa tan oo videos music si online qulquli.
Songza ayaa playlists badan ee xaaladaha kala duwan in aad dooran karto iyo sidoo kale waxaad ka heli kartaa ilmaha heeso aad rabto. Vimeo kale oo ay leedahay qayb kasta oo muusiko ah in aad ka heli karto videos music aad rabto in aad ka.
Qeybta 4: Sida loo download songs ilmaha u sameynta slideshow
Waxaad ka ilo kala duwan ka heli kartaa heeso ilmaha. Ha welwelin. Halkan waxaan kuu sheegi doonaan sida ay u soo bixi songs ilmaha laga soo rido meelaha music iyo goobaha music video siday u kala horreeyaan.
Barnaamijka aad u baahan tahay inaad kala soo baxdo songs ilmaha ka music goobaha-Wondershare Streaming Audio Recorder
1. Download music online ka goobood oo kala duwan oo la 1: 1 tayo wanaagsan
2. ceshano macluumaad song si toos ah
3. Jadwalka inaad kala soo baxdo iyo shaandhayso xayeysiis
Sida loo isticmaalo Wondershare SAR si download songs ilmaha laga soo rido meelaha music
Tallaabada 1. Download iyo rakib barnaamijkan on your computer
Download barnaamijkan si loo soo dajiyo on your computer ka dibna uu u bilaabi si ay u helaan diyaar.
Tallaabada 2. Start in download music
Guji ka Record button on geeska bidix ee kore ee suuqa hoose iyo tagaan goobaha music inuu u ciyaaro heeso ilmaha aad ka heli. Marka music waxay ka bilaabantaa ciyaaro, barnaamijkan u Qoraynaa doonaa si loo badbaadiyo si aad u computer.
Tallaabada 3. music si ay Lugood
Tag ka Library in la helo heeso aad duubay. Haddii aad u baahan tahay si ay u gudbiyaan music si ay Lugood, waxaad dooran kartaa heesta iyo riix Add Lugood in badhanka hoose. Waxa kaliya in si fudud.
Barnaamijka aad u baahan tahay inaad kala soo baxdo songs ilmaha ka music video goobaha-Wondershare AllMyTube
1. videos Download music ka goobaha sida YouTube, VEVO, MTV iyo wax ka badan
2. Warbixiinta MP3 files ka video files
3. jadwaliye Task, video ciyaaryahan iyo tababare
Sida loo isticmaalo Wondershare AllMyTube in download songs ilmaha laga soo rido meelaha music video
Download barnaamijkan si loo soo dajiyo on your computer. Xusuusnow in aad doorato version saxda ah. Marka aad u furo, waxaad ka heli doontaa suuqa kala nadiif ah sida ku cad xaq.
Tallaabada 2. Download videos ah
Tag meelaha video inuu u ciyaaro heeso ilmaha aad ka heli iyo waxaad arki doontaa ah Download button sabayn on xaq u sareeya. Riix badhanka si ay u bilaabaan soo degsado video ah. Waxa kale oo aad nuqul ka kartaa url ee video iyo riix URL paste button on suuqa kala aasaasiga ah ee barnaamijka.
Tallaabada 3. Beddelaan videos in ay MP3
Tag ay ku dhameysatay kaalinta maktabadda si aad u hesho video iyo riix badalo button on xaq. Dooranaysaa MP3 furmo Qaabka wax soo saarka. Riix OK si ay u bilaabaan soo celiyaa.
Qeybta 5: Sida loo sameeyo slideshow la songs ilmaha lagala soo bixi
Ka dib markii songs ilmahaaga slideshow waxaa lagala soo bixi, waxaad u isticmaali kartaa si duubey wada la sawiro iyo videos aad.
Barnaamijka aad u baahan-Wondershare DVD Slideshow Builder Deluxe
1. Ku dar inta ugu badan ee photos, videos iyo heeso si ay u sameeyaan slideshow
2. Habee slideshow ah oo leh qaababka movie weyn
3. Waxaad toosin kara wadaagaan slideshow ah in YouTube
Sida loo isticmaalo Wondershare DSB si ay u soo duubey gabayo ilmaha
Tallaabada 1. Ku dar photos videos ama barnaamijka
Riix dar Faylal ay kasoo dajiyaan sawiro ama videos ku saabsan barnaamijka ilmahaaga.
Tallaabada 2. Ku dar songs ilmaha si slideshow photo
Tag ka shakhsiyeeyo tab inay riix Music toolbar ka dibna waxaad ku dari kartaa music asalka. Ama waxaad straightly jiidi karaan songs ilmaha si ay ula socdaan music ah. Ka dib markii in, waxaad ku dari kartaa Hababka dheeraad ah oo slideshow ah.
Tallaabada 3. Save slideshow la music jeeda
Tag naadiya tab si aad u hesho slideshow badbaadiyey. Waxaad gubi karaa in DVD, badbaadiyay si toos ah u computer ama xataa wadaagaan in YouTube.
Sida loo sameeyo Salaan Cards Christmas la Videos
Songs Talooyin Dhalashada iyo Muqaal